Dai 16, 2021 0
Iko kumhanya uye kuita kwe Virtual Machine zvinoenderana nezvinotsanangurwa nemuchina wekutambira se RAM, processor, nezvimwe. Asi dzimwe nguva, kunyangwe uine komputa ine simba, iyo Virtual Machine inomhanya zvishoma. Muchikamu chino, isu tinotsanangura dzimwe nzira dzinokubatsira iwe kuita yako Virtual Machine kumhanya nekukurumidza.
Nei muchina wangu weVirtual uchimhanya zvishoma?
Tisati tatsanangura nzira dzekugadzira VM nekukurumidza, ngatione zvimwe zvezvikonzero zvekunonoka VM.
Host sisitimu inokwanisa.
Mamwe mapurogiramu anomhanya.
1] Yevadzidzi system kugona
Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru zvinoenderana nekumhanyisa kweVirtual Machine zvinoenderana. Kana iwe uchida yako Virtual Machine kuti ifambe mushe, iwe unofanirwa kuve une simba host system. CPU, RAM, uye diski nzvimbo ndizvo zvinhu zvikuru zvitatu zvinotaridza kuti simba rako rekutambira rakasimba sei.
Virtual Machines inoda yakawanda yekugadzirisa simba. Naizvozvo, zvinosungirwa kune inomiririra sisitimu kuve nemulticore central processing unit. Iyo multicore CPU inogona kushandisa iyo Virtual Machine zvirinani uye kutsetseka.
RAM chimwe chinhu chakakosha chinotarisa kumhanya kweiyo Virtual Machine. Sisitimu yako inofanirwa kuve ne RAM yakakwana kana iwe uchida kuona kumhanya kwakatsetseka kweiyo Virtual Machine. Izvo zvishoma RAM zvinodiwa zveVM i16 GB. Nekudaro, 8 GB RAM inogona kuve yakanaka mune mamwe mamiriro. Asi, kana uine 4 GB RAM, uchatarisana nenyaya dzekuita uchimhanya iyo VM, kunyangwe iwe wavhara mamwe mapurogiramu.
Disk nzvimbo ndechimwe chinhu chinokanganisa kumhanya kweiyo Virtual Machine. Kuti uite VM inomhanya zvakanaka, iwe unofanirwa kugovera yakakwana isina dhisiki nzvimbo. Kune izvi, yako inomiririra system inofanirwa kuve nenzvimbo yakawanda isina chinhu pane diski.
2] Mamwe maapplication ari kumhanya pamushini wekutambira
Kana VM inomhanya pane inomiririra komputa, inoshandisa iyo CPU, RAM, uye diski nzvimbo. Naizvozvo, kana iwe ukavhura akawanda maapplication kana software pane yako inomiririra komputa, iwe uchatarisana nekuita nyaya mu Virtual Machine. Zvekuita kwakanyanya kweVM, zvinokurudzirwa kuvhara ese ari kumhanya maapplication kana software pamushini wekutambira.
Maitiro ekuchimbidza iyo VirtualBox Virtual Machine
Dzinotevera nzira dzichakubatsira iwe kuti yako Virtual Mashini inomhanya nekukurumidza.
Isa VirtualBox Guest Kuwedzera.
Govera zvimwe ndangariro kuVM.
Govera mamwe CPU kuVM.
Wedzera ndangariro yevhidhiyo.
1] Isa VirtualBox Guest Kuwedzera
Iri ndiro danho rakakosha kuita VM kumhanya nekukurumidza. Iyo Yevashanyi Kuwedzeredzwa ine yakasarudzika madhiraivha ayo Virtual Machine inoda kuti ifambe mushe.
Anotevera ndiwo matanho ekumisikidza VB Guest Kuwedzera
Vhura Virtual Machine paVirtualBox.
Enda ku 'Midziyo> Insert Guest Kuwedzera CD mufananidzo. '
Vhura Ino PC.
Tora kaviri pane 'CD Drive (D): VirtualBox Guest Kuwedzerakuvhura.
Gadza 'VBoxWindowsKuwedzera-amd64. ' Kana yako yekumisikidzwa sisitimu yekuvakisa isingatsigire iyi faira, iwe unowana kukanganisa. Mune ino kesi, edza kumisikidza iyo Yevamwe Vaenzi.
Mushure mekugadziriswa kwapera, tangazve iyo Virtual Machine.
verenga: VirtualBox inoratidza dema screen uye kwete kubhowa muenzi OS.
2] Govera imwe RAM kuVM
Kungofanana nekombuta yemuviri, mashandiro eVM zvinoenderana nekuti yakawanda sei RAM yakapihwa kwairi. Iyo yakawanda ndangariro yaunogovera kune iyo VM, iyo inotapira ruzivo iwe yaunowana.
Kuti uwedzere huwandu hwendangariro muVM, tevera nhanho-dzakanyorwa pazasi:
Vhura VirtualBox uye sarudza iyo Virtual Machine.
Zvino, tinya pane Zvirongwa uye sarudza 'maitiro'kubva kuruboshwe.
Pasi pe "Motherboard'tab, fambisa chinotsvedza kuti uwedzere iyo RAM.
Dzvanya OK kuti uchengetedze marongero.
Ndokumbirawo musayambuke green mark pane inotsvedza nekuti inogona kukanganisa maitiro ehutano hwenyu. Kana ikasabatsira, iwe unofanirwa kuwedzera iyo chaiyo RAM pane yako inomiririra komputa.
3] Govera zvimwe CPU kuVM
Iyo inomiririra muchina CPU inobata zvese kuverenga kunodiwa kumhanyisa VM. Nekudaro, kana iyo Virtual Machine ikashandisa yakawanda CPU, inomhanya nekukurumidza uye kutsetseka.
Tevedza ari pazasi-akanyorwa matanho ekupa mamwe maCPU kuVM:
Vhura VirtualBox uye sarudza iyo VM iyo yaunoda kugovera mamwe maCPU.
Dzvanya pane Zvirongwa uye sarudza Sistimu kuruboshwe.
Pasi pe "Processor'tab, fambisa chinotsvedza kuti uwedzere huwandu hwePCUs yeiyo VM.
Ndokumbirawo uchengetedze inotsvedza pasi pegreen mark.
4] Wedzerai ndangariro yevhidhiyo
Kana uine basa rinorema kadhi kadi pane yako system, iwe uchiri kuona inononoka kumhanya kweVM, funga kuwedzera iyo vhidhiyo memory. Pamusoro peizvi, gonesa 3D kumhanyisa.
Isu takanyora matanho pazasi kuti uite izvi:
Sarudza Virtual Machine muVirtualBox uye tinya pane Zvirongwa.
Kanda pane 'kuratidza'kuruboshwe.
Fambisa chinotsvedza pasi pe 'Screen'tab kuti uwedzere memory memory.
Sarudza bhokisi rekutarisa mu 'kumhanyisaChikamu chekugonesa 3D kumhanyisa.
Ndinovimba chinyorwa ichi chakubatsira iwe kumhanyisa iyo Virtual Machine.
How yokugadza Windows OS pane VirtualBox.
Mashandisiro ekushandisa Dual Monitor ne VirtualBox chaiyo muchina.
Maitiro Ekubatanidza kune VirtualBox Windows Guest Uchishandisa Remote Desktop
Zvese zvaunoda Kuti Uzive nezve Guest Blogging
Oracle VM VirtualBox - Isa Virtualbox 6.1 mu Ubuntu 19.10
8 Yemahara Virtualization Software Mhinduro Yako Windows PC